ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် World Bank ၏ Private Sector Growth and Competitiveness ဆိုင်ရာ Identification Mission မှ Senior Economist ဖြစ်သူ Mr. Sjamsu Rahardja ဦးဆောင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | Commerce
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် World Bank ၏ Private Sector Growth and Competitiveness ဆိုင်ရာ Identification Mission မှ Senior Economist ဖြစ်သူ Mr. Sjamsu Rahardja ဦးဆောင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Wed, 03/14/2018 - 09:18 -- adminDep
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့ ၁၄း၀၀ နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် World Bank ၏ Private Sector Growth and Competitiveness ဆိုင်ရာ Identification Mission မှ Senior Economist ဖြစ်သူ Mr. Sjamsu Rahardja ဦးဆောင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ အား ဝန်ကြီးရုံး၊ ဧည့်ခန်းမ (၁) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ
“ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စီးပွာရေးလုပ်ငန်းများ မြှင့်တင်ရေးအထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ (၁/၂၀၁၈)ကြိမ်မြောက်” အစည်းအဝေး
“ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈) နှင့် (၂/၂၀၁၈)” သင်တန်းဆင်းပွဲ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ရုံးမှ သံအမတ်ကြီးဖြစ်သူ H.E. Mr. Kristian Schmidt ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
“သီးနှံအမျိုးအစားအလိုက် ပို့ကုန်အလားအလာသုံးသပ်ရေး အလုပ်ရုံဆွေး နွေးပွဲ (ဒုတိယအကြိမ်)”
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် ဗန်ကောက်မြို့အခြေစိုက် ကျူးဘားနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hector Conde Almeida အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် Forging The Futur Company Limited မှ Managing Director ဖြစ်သူ Mr. Ding Ying ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံ အမတ်ကြီး H.E. Mr. Scot Marciel ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးရန်နိုင်ထွန်းသည် CROWN Beverage Cans Myanmar Limited မှ Director ဖြစ်သူ Mr. Philip Choo Teck Hee ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
အငယ်တန်းစာရေး၊ စာရင်းကိုင်-၄၊ ဒုလက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး ရာထူး (၇) နေရာအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူ အမည်စာရင်း ကြေငြာခြင်း
“Myanmar National Portal အကြောင်းသိကောင်းစရာ” နှင့် “EIF အကြောင်းသိကောင်းစရာ”